July 2015 | OKKALA STORE
G Latt - ကြိုနေစေချင်တယ် ( Master Unplugged မှာဆို...
Fagutive Girl ( USA Love Movie ) ♥♥
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကန်မယ့် အင်္ဂလန် ရှက်ဖီးယူနု...
2014-2015 အတွက် အကောင်းဆုံး ဂိုးများ ♥♥♥
မော်တာပါများ ပါသလားတောင်ထင်ရတယ် :O
ကျောက်ဆည် HD လို့ပြောတာပါပဲ လိုချင်သူများ အောက်ပါလ...
Sex On Timeline ( THAI LOVE MOVIE )18+
ကမ္ဘာကျော် ဟာသဂိုး (၁၀ ) ဂိုး
Real Madrid vs Manchester City [4-1] All Goals & ...
ရင်ဘတ်ကြီးကို ၀ုန်းဒိုင်းကြဲစေသော ဓာတ်ပုံများ ♥♥
ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ မိုးကုတ် ၀ိပဿနာ နာ ...
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction Square sh...
ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Dagon Center2မှာ ...
ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ မိသားစု တစ်ခုကို ...
စပ်စုစိန် ( ပြေတီဦး + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် + ယွန်းရွှေရည်...
အမုန်းမရှိတဲ့ဘ၀ - ရဲလေး ( Feat - အေးမြအောင် ) အသစ်...
အနီရောင်(Mp3 Lyrics Album)
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးများ စုစည်းမှု ( ဒုတိယပိုင် ...
အခုလက်ရှိ ရုံတင်နေသော ၀မ်းဘတ် မင်းသား နှင့် ဟောင်ေ...
ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့မှာ...
ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ၀င်ငွေ စ...
Top 50 Skill Moves 2015 - HD
Crazy Solo Goals ● World's Best Players ● HD
လူကြီး ရောဂါ ( အချစ် စာအုပ် ) ♥♥♥
Liverpool vs Thailand All Stars 0-4 All Goals And ...
ရဲလေး နောက်တစ်ခေါက် (အမုန်းမရှိတဲ့ဘဝ)
Jurassic World (2015)မြန်မာစာတန်းထိုး
အဆဲချန်ပီယံဆိုတဲ့ကောင်တွေ ကြည့်ထားကြပါ နည်းနည်းပါး...
ကကြိုးစုံတဲ့ သတို့သား ( ပြေတီဦး + ရဲအောင် + မိုးေ...
♪ Master Selection 2015 Unplugged သီချင်းတွေ Down...
Erotibot ( 2011 - Love Movie )
မျိုးကြီး Live 90 Min Show ( လက်ခံပေးပါ )
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများ ဇာတ်လမ်းများ စုစည်းမှု ( C...
Sex Revenge 1993 ( ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲပါ )
ဗိုင်းရပ်များ ( ဇေရဲထက် + နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း + စံရတ...
စိတ်ဆိုးရခက်တဲ့ လူကြီး ( နေမင်း + နန်းဆုဦး ) မြန်...
မလိုချင်ဘူး....စစ် - နီနီခင်ဇော် (Official MTV) လေ...
A Nightmare On Elm Street ( 2010 ) မြန်မာစာတန်းထို...
Blue Streak(1999) မြန်မာစာတန်းထိုး
အဖေနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ BeatBox ပြိုင်ပွဲ စောက်ရမ်းဂွတ်...
ထိုင်းဟာသ သရဲကားလေးပါ မကြည့်ရသေးသော သူများအတွက်
Ah Nge Live 90 Full HD (Iron Cross)Live Show 2015 ...
A Romantic Ghost Story ♥♥♥ ( ကားဟောင်းလေးတစ်ကားပါ ...
ရယ်စရာလား ( နေတိုး + အိချောပို ) မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာ...
ဒီနေ့က Super Sunday ဆိုတော့ ဥက္ကလာသားလေး Bhyu Har ...
နှင်းဆီ ၁၀၀၀ ( ပြေတီဦး + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် )
အကယ်ဒမီ ရွှေပန်းချီ အငြိမ့် 2015 - Soe Myat Thuzar...
Myanmar Women Fashion Show 2015
Ye Lay To Release 7th Solo Album "Naut Ta Khauk"
Seven Princess Driver ( Korea Love Movie ) ကားသစ်ေ...
Japan 2-1 England FULL Highlights Women's World C...
G Latt - ကြိုနေစေချင်တယ် ( Master Unplugged မှာဆိုထားတာပါ )
နောက်ထပ် MTV အသစ်များ နားထောင်ချင်ပါက အောက်ဖော်ပြပါလင့်တွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 8:43 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:22 AM No comments: Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကန်မယ့် အင်္ဂလန် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် ကစားသမား ကရင်လူမျိုးလေး ကလာဟဲ ရဲ့ ဘောလုံး skill ကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 7:10 AM No comments: Links to this post
ဘောလုံး အားကစား VIDEO များ Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 12:21 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 10:07 PM No comments: Links to this post
ကျောက်ဆည် HD လို့ပြောတာပါပဲ လိုချင်သူများ အောက်ပါလင့်တွင် အားရပါးရ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်
တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဒေါင်းပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြည့်ကြပါရန်....
Posted by okkala net at 5:48 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 4:20 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 4:33 AM No comments: Links to this post
Real Madrid vs Manchester City [4-1] All Goals & Highlights - Internati...
Posted by okkala net at 6:09 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 6:38 PM No comments: Links to this post
ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ မိုးကုတ် ၀ိပဿနာ နာ ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့် မွေးနေ့ နှင့် သားလေး အားချစ် ရက် (၁၀၀) ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ
Posted by okkala net at 6:28 PM No comments: Links to this post
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction Square shopping mall မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော် ရဲ့ "အနီရောင်" တစ်ကိုယ်တော် တေးစီရီး Audio CD မိတ်ဆက်ပွဲ
Posted by okkala net at 6:27 PM No comments: Links to this post
ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Dagon Center2မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျောက်ဂျက် ရဲ့ "တိုင်းသိပြည်သိ" တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီး Karaoke/Music Video DVDs မိတ်ဆက်ပွဲ
Posted by okkala net at 6:26 PM No comments: Links to this post
ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ မိသားစု တစ်ခုကို အမှတ်မထင် ပျော်ရွှင်စေခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် .. .
စပ်စုစိန် ( ပြေတီဦး + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် + ယွန်းရွှေရည် ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
အမုန်းမရှိတဲ့ဘ၀ - ရဲလေး ( Feat - အေးမြအောင် ) အသစ်ထွက် သီချင်းလေးပါ
Download သီချင်းအသစ်များကို အောက်ပါလင့်တွင် UP TO DATE တင်ဆက်ပေးနေပါသည် www.okkalamusicchannel.blogspot.com
Posted by okkala net at 2:06 AM No comments: Links to this post
တေးဆို ။ ။ Ni Ni Khin Zaw
MP3 ကို Computer / Mobile တို့ ဖြင့် ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ စာသားထိုးနဲ့ သီချင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Resume လင့်နဲ့ တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို အောက်မှာဒေါင်းယူပါ။
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးများ စုစည်းမှု ( ဒုတိယပိုင် ♥♥♥). Credit to Uploaders
Posted by okkala net at 6:39 AM No comments: Links to this post
အခုလက်ရှိ ရုံတင်နေသော ၀မ်းဘတ် မင်းသား နှင့် ဟောင်ကောင်ဖိုက်တာများ ( SPL2Movie )
Download ဆွဲပြီးသား full movie ကို okkala အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 6:59 PM No comments: Links to this post
ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Unvierse Pathein 2015 အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ
Posted by okkala net at 5:20 AM No comments: Links to this post
ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ၀င်ငွေ စံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ sex and zen3full movie 3D
Posted by okkala net at 8:02 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:54 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:02 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 2:23 AM No comments: Links to this post
ဒေါင်းလုပ်ချင်သူများ အောက်ပါလင့်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 2:14 AM No comments: Links to this post
Liverpool vs Thailand All Stars 0-4 All Goals And Highlights ( လီဗာပူး vs ထိုင်းတို့၏ ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲ )
Posted by okkala net at 7:21 PM No comments: Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂နှစ်ခန့်က ပြသနာများကြောင့် ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ် အပန်းဖြေစခန်း (Jurassic Park) ကြီး ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက် ပန်းခြံရဲ့အုပ်ချုပ်သူမန်နေဂျာ ကလဲ (Claire) ရဲ့ တူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇက်ဂ် (Zach) နဲ့ ဂရေး (Gray) တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အဒေါ်ရှိရာ ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ်ကို သွားလည်ကြပါတယ်။ အလုပ်များလွန်းတဲ့ အဒေါ်က တူနှစ်ယောက်ကို လမ်းညွှန်လုပ်ဖို့ရာ သူမရဲ့လက်ထောက် ဇာရာ (Zara) ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပန်းခြံထဲရောက်တဲ့အခါ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ဇာရာ့ကို မျက်ခြေဖြတ်ပြီး နှစ်ယောက်သား လျှောက်လည်ကြပါတော့တယ်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းမယ့်လုပ်ငန်းရှင်များကို ဆွဲဆောင်ရန်နဲ့ လာလည်သူပိုများလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင် ဒေါက်တာ ဟန်နရီဝူး (Henry Wu) ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့က ဒိုင်နိုဆော မျိုးစိတ်အသစ်များ ဖန်တီးမွေးမြူခဲ့ရာ လက်ရှိမှာ အင်ဒိုမီးနပ်စ်ရက်စ် (Indominus rex) လို့ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ ဒိုင်နိုဆောတစ်မျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ်ရဲ့ အကြီးအကဲ ဆိုင်မွန်မာဇရာနီ (Simon Masrani) က အင်ဒေါမီးနပ်စ်ရက်စ် ကို ပြည်သူတွေကို မပြသခင် လေ့လာအကဲဖြတ်ပေးဖို့အတွက် ဗလော်ဆရပ်ပ်တာ (velociraptor) ဒိုင်နို်ဆောမျိုးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ သုတေသနပညာရှင် အိုဝင် (Owen) ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗစ် (Vic) ကတော့ အိုဝင်လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ ဗလော်ဆရပ်တာ လေးကောင်ကို စစ်ရေးမှာအသုံးပြုရန် ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ အိုဝင်ကတော့ ဗလော်ဆရပ်ပ်တာ တွေက အလွယ်တကူထိန်းချုပ်လို့ ယဉ်ပါးလာမယ့် ဒိုင်နိုဆောတွေမဟုတ်ဖူးလို့ ဆိုကာ ဗစ်ရဲ့ အလိုကိုမလိုက်လျောခဲ့ပါဖူး။
အိုဝင်နဲ့ မန်နေဂျာ ကလဲလ်တုို့ အင်ဒေါမီးနပ်စ်ကို လှောင်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါ အိုဝင်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာပြီး အိုင်ရက်စ် (I. rex) လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ အင်ဒေါမီးနပ်စ်ရက်စ်က အန္တရယ်ရှိတဲ့ ဒိုင်နိုဆောဖြစ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ပြောပြီးမကြာချင်မှာပဲ ၀န်ထမ်းတွေကို မျက်စိမှောက်အောင် လှည့်ဖြားကာ လှောင်အိမ်ထဲမှာ ပုန်းနေတဲ့ အိုင်ရက်စ် က အိုဝင်နဲ့ အခြားဝန်ထမ်း ၂ယောက်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး တောထဲကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
မာဇရာနီက နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ကို တောတွင်းသို့ စေလွှတ်ပြီး အိုင်ရက်စ်ကို အရှင်ဖမ်းခိုင်းရာ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးနီးပါး အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အန္တရယ်ကြီးမားလာတဲ့အတွက် ပန်းခြံတွင်း လေ့လာရေးအဖွဲ့အားလုံးကို ပြန်ရုတ်သိမ်းပေမယ့် ဂရေးနဲ့ ဇက်ဂ်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ဂျိုင်ရိုစဖီးယား (gyrospheres) လို့ခေါ်တဲ့ မှန်လုံဘောလုံးငယ်လေးနဲ့သွားရတဲ့ တောတွင်းစွန့်စားခန်းအစီအစဉ် ကိုစိတ်ဝင်စားကာ ရေဒီယိုမှကြေငြာချက်ကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါတယ်။ တောတွင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ အိုင်ရက်စ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီး သူတို့ယဉ်ငယ်လေးလဲပျက်ဆီးသွားပါတယ်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကတော့ ရေတံခွန်ထဲကို ခုန်ချလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
အထူးဖန်တီးထားတဲ့ ဥာဏ်ရည်မြင့် ဒိုင်နိုဆောကြီး အိုင်ရက်စ်ကတစ်ဖက် လူသားဆန်တဲ့ သိပ္ဗံပညာရှင်များကတစ်ဖက် ၀ိသမလောဘသားတွေဖြစ်တဲ့ အိုင်ဂျန်ကုမ္ဗဏီပိုင်ရှင် မာဇရာနီနဲ့ ဗစ်တို့ကတစ်ဖက် အသီးသီး အားပြိုင်ကြတဲ့ ပွဲမှာ နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်အုံးမယ် ဆိုတာကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်သူကိုယ်တိုင် ခံစားနိုင်ဖို့ ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်ထားပါရစေ။
ယခင်ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ် ဇာတ်လမ်းများရဲ့ ဒါရိုက်တာ စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ် (Steven Spielberg) မှတာဝန်ယူထုတ်လုပ်ကာ ဒါရိုက်တာ ကော်လင်းထရပ်ဗားရိုး (Collin Trevorrow) ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားက ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ် ဇာတ်လမ်းတွဲများရဲ့ ၄ကားမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ပထမဆုံး ရုံတင်တဲ့အပတ်မှာတင် နံမည်ကြီး The Avengers နဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကားများရဲ့ ၀င်ငွေကိုကျော်လွန်ကာ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ရုံသာမက ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ တတိယမြောက် ၀င်ငွေအများဆုံးဇာတ်ကား လဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ ရုံတင်လို့တောင် မပြီးသေးတဲ့ဒီကားကို OKKALANET မှာ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့အတူ Blu Ray Qualityနဲ့ ကြည့်လို့ရပါပြီ။
(ဇာတ်ကားအညွန်းကိုတော့ MMmovieGuideကနေတစ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ။ )
Credit to ChannelMyanmar
အောက်ပါလင့်တွင် တိုက်ရိုက်ကြည်ရှု့နိုင်သလို & ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသား Full Movie ကို okkala အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများ Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
အဆဲချန်ပီယံဆိုတဲ့ကောင်တွေ ကြည့်ထားကြပါ နည်းနည်းပါးပါး ဆဲတတ်ရုံလောက်နဲ့ တက်မလာနဲ့ သေသွားမယ်
ကကြိုးစုံတဲ့ သတို့သား ( ပြေတီဦး + ရဲအောင် + မိုးဟေကို ) မြန်မာ ဗီင်္ဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 4:21 AM No comments: Links to this post
♪ Master Selection 2015 Unplugged သီချင်းတွေ Down လို့ရပါပြီ ♫
Master Selection 2015 Unplugged သီချင်းတွေ Down လို့ရပါပြီ
1.မြင်နေခွင့်လေးပေး Unplugged Version(Aung Phyo)
2.ကြိုနေစေချင်တယ် Unplugged Version(G Latt)
3.အချစ်လို့ခေါ်သလားUnplugged Version(Htoo El Linn)
4.အချစ်များစွာယူ Unplugged Version( Htun Yati)
5.ကမ္ဘာငယ်လေး Unplugged Version(Eaint Chit)
6.ချစ်တယ် Unplugged Version(Ma Naw)
7.ချစ်သူ Unplugged Version( Myint Myat)
8.နစ်နာမယ် Unplugged Version(Naw Dint)
9.မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ Unplugged Version(Ni Ni Khin Zaw)
10.နွယ်နီ Unplugged Version(Nyi Min Khine)
11.ဘာမှမလိုဘူး Unplugged Version(Po Po)
12.နင်ဟာငါ့ရဲ့အရာရာ Unplugged Version(Pu Suu)
13.ဖွင့်ပြောလိုက်ချင်ပြီ Unplugged Version( Wai La)
14. အနီးဆုံးလူ Unplugged Version(Wana)
15.အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ Unplugged Version(Zwe Pyae)
Posted by okkala net at 3:01 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 2:52 AM No comments: Links to this post
ပထမဆုံးရေသားဘူးတဲ့စာဖြစ်သောကြောင့် စာဖတ်ရထောက်တာတို့စာလုံးပေါင်းမှားတာတို့ အားသီးခံဖတ်ရှု့စေချင်ပါတယ်။ အရေးအသားနှင့်ပါတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော် hand phone တွေကလဲဈေးတော်တော်ကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ ကျွန်တော်ကနယ်ကနေရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတက်လာပြီအတတ်ကောင်း (အရက်၊မာဆွတ်၊မာဆတ်၊ကလပ်၊ဖာ) တွေလေ့လာနေတဲ့တောသားမြို့ရောက်ပေါ့ဗျာ။ hand phone မ၀ယ်နိုင်တော့ဖုံးဆက်စရာရှိရင်ဖုံးဆိုင်ကနေဆက်ဆက်ရတယ်ဗျ၊ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဆက်နေကြဖုံးဆိုင်ကလူတွေနဲ့ခင်သွားတယ်ပေါ့။ အဲဆိုင်ကိုလဲကျွန်တော့်လိုပဲဖုံးပြောရင်းခင်တဲ့ လူတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျ၊ အဲထဲကမှကျွန်တော်မနူးမနပ်ကံထူးရှင်လို့ပဲဆိုရမလား အဲခေတ် ရထားလတ်မှတ်တွေကို ၃ ရက်လောက်မနက်စောစော တန်းစီပြီးဝယ်ရတာကိုပဲကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်ရမလားတော့မသိဘူး
Posted by okkala net at 2:31 AM 1 comment: Links to this post
Posted by okkala net at 2:19 AM No comments: Links to this post
ဗိုင်းရပ်များ ( ဇေရဲထက် + နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း + စံရတီမိုးမြင့် + ဆောင်းယွန်းစံ ) မြန်မာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 1:57 AM No comments: Links to this post
စိတ်ဆိုးရခက်တဲ့ လူကြီး ( နေမင်း + နန်းဆုဦး ) မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 1:56 AM No comments: Links to this post
မလိုချင်ဘူး....စစ် - နီနီခင်ဇော် (Official MTV) လေး ထွက်လာပါပြီ အားပေးကြပါဦး
Posted by okkala net at 12:54 AM No comments: Links to this post
A Nightmare On Elm Street ( 2010 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ChannelMyanmar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Special Movie ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် A Nightmare On Elm Street ဇာတ်ကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သရဲ
ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တစ်ကားအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်..1984 ခု နှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီကမ္ဘာကျော်
ဇာတ်ကားဟာ 2010 ခုနှစ်မှာပြန် လည်အသက်သွင်းခံရပေမယ့် မူရင်းဇာတ်လမ်းကတော့
ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိသူ..အလွန်အမင်း အတွေးလွန်တတ်သူ..နှလုံးရောဂါရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်
ဆိုရင်တော့ ဒီ ဇာတ်ကားကို ကျော်သွားလိုက်ဖို့ပါ
ဇာတ်လမ်းအစကတည်းက အိမ်မက်တခုနဲ့အစပျိုးထားပြီး ကော်ဖီဆိုင်တခုထဲမှာ
အိမ်မက်မက်နေတဲ့ ဒင်းန် တယောက် လန့်နိုးသွားပါတယ်..သူ့သူငယ်ချင်းရောက်လာတော့
လုံးဝမအိပ်ရဲတော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေမယ့် သူ့သူငယ်ချင်းခရစ်က ဒါတွေဟာ
အိမ်မက်သက်သက်သာဖြစ်ပြီး စိတ်မပူဖို့ပြောပြီး သန့်စင် ခန်းထသွားခဲ့တယ်
နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ်ကလည်း ထိုအိမ်မက်တွေမြင်မက်..တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့
ဘာကြောင့်ဒီလိုအိမ်မက်တွေသူတို့မှလာဖြစ်ရတာလဲ..ဆိုပြီး ကြားထဲက ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုကို
နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ကွမ်တင် နဲ့ နန်စီ တို့စုံစမ်းရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ ရလာတဲ့ရလဒ်ကတော့
( 720p HD အကြည်ကို ဖိုင်ဆိုဒ် 400MB ကျော်ကျော် 500MB ၀န်းကျင်လောက်နဲ့
တင်ပေးထားပါတယ်..mkv file ဖြစ်လို့ဖွင့်မရဘူးဆိုရင် ဖုန်းမှာဆို MX Player ဖြင့်ကြည့်ပါ
Computer မှာဆိုရင်တော့ VLC Player နဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် )
credit to channle myanmar
Download ဆွဲပြီးသား full movie ကို okkala ရှိ အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများ folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 11:01 PM No comments: Links to this post
သူခိုးတွေက တန်းဖိုးအရမ်းကြီးတဲ့ အပြာရောင် စိန်တုံးကိုခိုးရင်း
အချင်းချင်းသစ္စာဖောက်ရာကနေ ရဲတွေ ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် အဖမ်းခံရတော့မှာမို့ စိန်တုံးကြီးကို အဲဒီနားက အဆောက်အအုံမှာ ဖွက်ထားခဲ့လိုက်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီဖွတ်ထားခဲ့တဲ့ သူခိုးကနေ ထောင်ကနေ လွတ်လာရော စိန်တုံးကို ပြန်ယူဖို့လုပ်တော့ အဲဒီအဆောက်အအုံက ရဲစခန်းဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။
အဲဒါကနေ အဲဒီသူခိုးက ရဲအယောင်ဆောင်ပြီး စိန်တုံးကို ဘယ်လို ပြန်ယူမှာလဲ၊ ရဲဘ၀မှာရော ဘာတွေ တစ်လွဲတစ်ချော်ဖြစ်ဦးမှာလဲဆိုတာကို ဟာသဆန်ဆန် ရိုက်ထားတဲ့ကားပါ။
သူခိုးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Martin Lawrence ရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လဲ ဒီကားက ဟာသကားတွေထဲမှာ ဘယ်အချိန် ပြန်ကြည့်ကြည့် ဇာတ်ကားကောင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။
မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ပါဦး ( credit to channel myanmar )
Download ဆွဲပြီးသား full movie ကို okkala အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများ folder ထဲရှိ အသစ်ထွက် နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကား ဖိုဒါထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
အဖေနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ BeatBox ပြိုင်ပွဲ စောက်ရမ်းဂွတ်တယ် ကြည့်လိုက်ဦး :)
Posted by okkala net at 2:26 AM No comments: Links to this post
Ah Nge Live 90 Full HD (Iron Cross)Live Show 2015 ( Rock ပရိသတ်များအတွက် )
ီDownload ဆွဲပြီးသား Show ပွဲ အပြည့်အစုံ Video file ကို okkala အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများ Folder ထဲရှိ show & အငြိမ့် folder ထဲတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
A Romantic Ghost Story ♥♥♥ ( ကားဟောင်းလေးတစ်ကားပါ အရမ်းကောင်း၏ )
Posted by okkala net at 3:21 AM No comments: Links to this post
ရယ်စရာလား ( နေတိုး + အိချောပို ) မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
ဒီနေ့က Super Sunday ဆိုတော့ ဥက္ကလာသားလေး Bhyu Har ရဲ့ Super Sunday MTV လေးနားထောင်ကြည့်ပေးပါ သောက်ရမ်းမိုက်
Posted by okkala net at 2:44 AM No comments: Links to this post
( ၂၁ )ရာစုမှာ မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်လာကြပါပြီ။ ဘယ်အလုပ်တွေမှာပဲကြည့်ကြည့် မိန်းမဝန်ထမ်းတွေက တောင်ပုံရာပုံပါပဲ။ company ၊ အရောင်းဆိုင် ၊ စက်ရုံ စတဲ့နေရာတွေမှာ အဓိကဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေက မိန်းမသားတွေချည်းပါပဲ ။ အဲလို မိန်းမတွေချည်း နေရာယူလုပ်ကိုင်နေကြ တော့ ယောကျာ်းတွေက ဘာအလုပ်လုပ်လို့ရကြသလဲ … ။ ဟုတ်ကဲ့ … ။ ရှိပါတယ် … ။ ယောကျာ်းတွေက အထွေထွေလုပ်သားတို့ ၊ ရုံးပြာတာတို့ ၊ ဒရိုက်ဘာတို့ ၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတို့ အဲလိုနေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ် ။ မိန်းမတွေထက် အဆင့်နိမ့်တဲ့ နေရာဌာနတွေမှာ လုပ်နေကြရတာပါ ။ အလုပ်ရှင်တွေကလည်း အလုပ်ခေါ်ရင် အမျိုးသမီးဝန်းထမ်း အလိုရှိသည် ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပဲ တင်ကြတာ လည်း ပါပေသည် ။ မိန်းမတွေအများဆုံး ဦးဆောင်နေတဲ့လက်အောက်မှာ ယောကျာ်းတွေက သူတို့ခိုင်ထားတဲ့ ကိစ္စအဝဝကို မငြီးမငြူလိုက်လုပ်ပေးနေရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာပေါ့ဗျာ … ။ “ရွှေအလင်း” company က ခရီးသွား အေဂျင်စီလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည် ။ ရန်ကင်းရှိ ကွန်ဒိုမီယံတိုက်ခန်းတစ်ခု၌ ရုံခန်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး ရုံးဝန်ထမ်းလူအင်အား( ၁၀ )ယောက်ခန့် ဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် ။ ထို company ရှိ ဝန်ထမ်းအများစုက မိန်းမသားတွေ ဖြစ်ပြီး လူနည်းစုသာ ယောကျာ်းများဖြစ်ကြသည် ။ ပိုင်ရှင်က မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ နံမည်က ဒေါ်လျှံဝေ … ။ ဒါပေမယ့် သူမက ထိုလုပ်ငန်းကို အစစအရာရာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လူတစ်ယောက်နှင့် လွှဲထားပြီး ကျန်းမားရေးအရ အနားယူနေလေသည် ။ ထိုသူမှာ စုစုလဲ့ဆိုသည့် အသက် ( ၃၀ ) အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည် ။ စုစုလဲ့က တစ်ကယ်လည်း တော်ပါ သည် ။ သူမပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဘွဲ့လက်မှတ် ၊ သင်တန်း လက်မှတ်တွေက ဖိုင်တစ်ဖိုင်နှင့် အပြည့် တစ်ထပ်ကြီးရှိသည် ။ ဒါကြောင့်လည်း သူဌေးကိုယ်တိုင်က ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ရာထူးကြီးကြီးပေးထားတာ ဖြစ်သည် ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်သည့်ကိစ္စတော့မဟုတ် ။ ခရီးသွား အေဂျင်စီလုပ်ငန်းဆိုတာမျိုးက ရုံးခန်းမှာထိုင်ပြီး ဖုန်းလေးနဲ့ အချိတ်အဆက်လုပ်ပြီး လက်မှတ်ဖြတ် ၊ ကုန်အတင်အပို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းများ လုပ်ပေးရလို့ မပင်ပန်းဘူး ထင်ရပေမယ့် အတော်တော့ ခေါင်းစားသည့် အလုပ် ။ ဒီတော့ စုစုလဲ့မှာလည်း အမြဲလိုလို အလုပ်တွေနဲ့ လုံးထွေးနေ တတ်လေသည် ။ စုစုလဲ့က အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ လင်ဖြစ်သူက အဝေးပြေး express ကားကို ကိုယ်တိုင်ထောင်ပြီး မောင်းနေသူဖြစ်တော့ အိမ်းကို သိပ်မကပ်ဖြစ်သည့် လူမျိုး ။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သိပ်ပြီး လက်ပွန်းတတီးမရှိလှ ။ အလွမ်းသည်လို့မရကြသည်မှာပင် အချိန်တွေ အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ် ဘဝမှာ လင်မယားတွေဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အတူမနေဖြစ်ကြ ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုလုပ်ဖြစ်ကြသည့် လင်မယားစုံတွဲတွေ ဒုနဲ့ဒေးပင် ။ ထိုအထဲတွင် စုစုလဲ့ တို့ လင်မယားလည်း အပါအဝင်ပေါ့ ။ သွေးသားဆန္ဒ ၊ လိင်မှုကိစ္စတွေကိုမေ့ဖျောက်ပြီး အလုပ်ထဲအာရုံစူနစ်ပြီး နေလာခဲ့သည့်စုစုလဲ့တစ်ယောက် ဒီနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း သူများတွေရုံးဆင်းပြီးကြတာတောင် သူမမှာ အလုပ်မပြီးနိုင်သေး ။ လကုန်ရက်မို့ ဝန်ထမ်းလစာ ၊ ဝင်ငွေ ၊ ထွက်ငွေစာရင်းတွေ လုပ်နေရသည် ။ သူမက ဒီ company ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ရာထူးရထားတာမို့ စာရင်းတွေစစ်ပြီး သူဌေး ထံပို့ပေးရဖို့ ရှိနေ၏ ။ ထို့ကြောင့်လည်း အလုပ်က မပြတ်သေးတာ ဖြစ်တော့သည် ။ “အစ်မ … ဒီနေ့လည်း နောက်ကျမယ်ထင်တယ် … အဆာပြေစားဖို့ တစ်ခုခုသွားဝယ်ပေးရမလား …. ”
အကယ်ဒမီ ရွှေပန်းချီ အငြိမ့် 2015 - Soe Myat Thuzar, Khine Thin Kyi,...
Posted by okkala net at 4:46 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 10:24 PM No comments: Links to this post
Seven Princess Driver ( Korea Love Movie ) ကားသစ်လေးပါ ကြည့်တောင် မကြည့်ရသေးဘူး
Posted by okkala net at 1:53 AM No comments: Links to this post
Japan 2-1 England FULL Highlights Women's World Cup Semi Final 2015
Posted by okkala net at 11:14 PM No comments: Links to this post